Kader Khan Wiilkisa Sarfaraz Khan”Govinda Waxuu Leeyahay Kader Khan Waa Aabahey Bal Weydiya Aabihiis Marku Xanuunsana Halkuu Ku Ogaa” – Filimside.net
Kader Khan Wiilkisa Sarfaraz Khan”Govinda Waxuu Leeyahay Kader Khan Waa Aabahey Bal Weydiya Aabihiis Marku Xanuunsana Halkuu Ku Ogaa”
Sidaan wada ognahay Rugcadaa Kader Khan waxuu geeriyooday 31 December 2018 xili habeen ah isagoo kusugna dalka Cannada kadib mudo uu xanuunsana neefsashadana uu ku dhibana.
Khan waxaa u tacsiyeeyen qaar kamid ah xidigaha Bollywoodka inkastoo jilaagan geeridiisa saameeyn weyn ku yeelan Bollywoodka maadama uu muslim ahaa intuu xanuunsanaana wax soo booqday ama xaalkisa wareystayna majirin.
Hadaba markuu geeriyoday kadib Super Star Govinda ayaa ka hadlay geeridiisa sidaan idiin la wadaagnay xili uu saxaafada wareysi siinayey isagoo muujiyay inuu aad oga xumaaday geerida Khan.
Waxuu Govinda tilmaamay inuu Kader ahaa macalinkiisa iyo aabihis oo kale dhanka fankana in badan kaga dayan jiray hadaba Kader wiilkisa Sarfaraz Khan ayaa dhibsaday oraahda Govinda wuuna usoo jawaabay.
Waxuu yiri Sarfaraz oo hadlaayo,”fadlan waxaad Govinda weydiisan halkuu ku ogaa aabihiis Kader Khan waa isaga leh Kader Khan waa aabahay oo kale iyo macalinkeyga waxuu xaalka macalinkiisa u ogaan waayey halmar xitaa usoo wici waayey haduusan u imaan karin xitaa.”
“Waxaa la yaab leh ilaa hada geeridiisa isagoo maqlay xitaa nama uusan soo wicin saxaafada horteedana waxuu ka sheegaya in uu Kader Khan aabihiis oo kale ahaa shirkadeena Bollywoodka ma sidan ayee isku bedeshay qofka caafimadka kaliya miyaa lagu rabaa qof wada shaqeen idin dhexmartay xitaa geeridiisa lagama tacsiyoonaya miyaa.”